Ururka dhalinyarada ee OYSU oo ah urur caan ah kana hawlgala dhamaan dunida dacaleeda meel kasta oo bulshada Soomaaliyeed ku dhaqantahay, isla markaana matala shacabka dulman ee Soomaalida Ogaadeeniya ayaa maanta 9da jirsaday.
Wixii ka horeeyay 2010 ka waxaa daafaha aduunka ku firirsanaa dhalinyarada Soomaalida Ogaadeeniya kuwaas oo isku xidhan meel kasta oy joogaan. Waxayna samaysteen ururo laysku baro dhalinta iyo maadooyin keeni kara in laysku xidhnaado
Hadaba markii la ogaaday faa-iidada iyo waxtarka ay leeyihiin dhalinyaradu ayaa la gartay in loobaahan yahay hal magac oo mideeya ururo badan oo isku ujeedo ah dhamaantoodna garabtaagan Shacabkooda iyo qadiyadooda gobanimo doonka ah. Waxaana la asteeyay sidii ugu haboonayd ee lagu heli lahaa. Arintaas oo gudiyo iyo shirar badan laga yeeshay waxaa qabsoomay shirwayne kadhacay qaarada yurub kaas oo lagu dhisay ururka OYSU 27-06-2010 halkaas oo lagu dajiyay nidaam iyo qorshe laguna doortay maamul haga oo uu hogaanka u hayo Mudane Mujaahid Sheekh Ibraahim. Ururku wuxu mudadaas awooda saaray sidii dhalinyarada loo midayn laha iyo sidi farac yada loo balaadhin laha.
Waxaa sidokale halkaa kasii dhaqaaqay misaankii iyo xoogii ururka dhinyarada waxayna soo bandhigeen awood iyo cudud muujisay wax qabadkoodi waxayna kasoo dhalaaleen aduunka mudo yar gudaheed.
Mudo sadex sano kadib ah waxaa Shirwaynihii ururka lagu qabtay dalka Maraykanka halkaas oo lagu qiimeeyay ururka mudadii uu jiray waxaana la gaadhay guulo lagu taamo waxaana dhacday doorashadii 2 aad ee ururka markale ayaa la doortay mudane Mujaahid Sheekh, balse mudo yar kadib waxaa hogaanka sare qabtay Mudane Jamaal Xukun. Ururku wuxu mudadaas awooda saaray qaybaha xuquuqul isnaanka iyo qaybta advocacy ga.
Sidoo kale 3 sano kadib waxaa shirwaynihii 3aad lagu qabtay qaarada Yurub gaar ahaan wadanka Germany, waxaana ladhisay maamulka hada jira ee uu hogaanka ka yahay Mudane Shaafi Sheekh Cabdi maamulkaas oo kaga duwan kuwii hore mudada oo laso gaabiyey lagana dhigay 2 sano. Ururku wuxu mudadaas sii xoojiyey qaybaha xuquuqul insaanka iyo advocacy iyado guuxa dhalinyarada aad looga daremayey dunida oo dhan. Uruku waxay markii ugu horaysay galeen Ogadenia iyado farcyo kasameeyey Gobolada Ogadenia.
Waxa la rajaynaya sanadkan gudihiisa inu Shirwaynihii 4aad ee OYSU Ka qabsoomo gudaha Wadanka Ogadenia iyado hada qaban qaabadiisi lagu guda jiro.